Ciidamada amniga ee gobolka Bakool oo gacanta ku dhigay waxyaabaha qarxa oo dhulka lagu aasay – Radio Muqdisho
Ciidamada ammaanka gobalka Bakool ayaa gacanta ku dhigay waxyaabo Qarxa oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku aaseen deegaanka Garasweyne, sida uu laga soo xigtay Maamulka degmada Xudur.
Guddoomiyaha Degmada Xuddur Maxamed Macalin oo la hadlay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed SONNA ayaa sheegay in ay ka war heleen xog ku saabsan in waqti dambe oo xilli habeen ah miinooyin lagu rakibay dhowr qeyb oo kamid ah saldhigga magaalada, kuwaas oo la rabay in lagu waxyeeleeyo saraakiisha iyo ciidamada booliska gobalka.
Maxamed Macalin, Guddoomiyaha Xudur ayaa sheegay in ay qabteen saddex ka mid ah dadka la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen qaraxyadaasi lagu aasay deegaanka, kuwa kalena ay ku daba jiraan, kuwaasi oo uu sheegay inay gacanta ku soo dhigi doonaan, si cadaaladda loo horgeeyo.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa kadib markii ay ku jabeen dagaallada gobolka Bakool, waxa ay bilaabeen inay beegsadaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah.
Ku-simaha Ra’iisul Wasaaraha iyo Safiirka Shiinaha oo ka wada hadlay Abaaraha ka jira Gobollada dalka “SAWIRRO”
Akhriso khubaddii Madaxweynaha Dalka uu ka jeediyay Daah-furka barnaamijka Wadajir